चिकन Tortilla सूप - Fav कम्फर्ट फूड} - व्यंजनहरु
कसरी एक पेय चमक बनाउन
क्रीम चीजको साथ ह्यास ब्राउन क्यासरोल
एक पाउन्ड मा चामल को कति कप
कुखुरा र खट्टा क्रीमको साथ भरण क्यासरोल
चिकन Tortilla सूप मेरो मनपर्ने सान्त्वना खानाहरू मध्ये एक हो! कुखुराको स्तन, मकै, सिमी, र अन्य स्वादिष्ट सामग्री टमाटर बेसमा सिमेर गरिन्छ। क्रिस्पी होममेड तोर्टिला स्ट्रिप्स, एवोकाडो, लाइम, र सिलेन्ट्रोको साथ उत्तम मेक्सिकन-प्रेरित सूपको लागि शीर्ष यस स्वादिष्ट सूप!
हामी यहाँ टेक्स मेक्स र मेक्सिकन रातहरू बिताउन मन पराउँदछौं। मकै डुबकी , तत्काल भाँडा कुखुरा tacos , गोमांस enchilada क्यासरोल , तपाईं यसलाई नाम दिनुहोस्।
चिकन Tortilla सूप मेरो मनपर्ने हो र म मेक्सिकोको भ्रमण गर्दा म सँधै अर्डर गर्दछु। यात्रा को बारे मा महान कुरा केहि व्यंजनहरु को संस्करण सिर्जना हो जब म मेरो साथीहरु र परिवार को लागी घर (र तपाइँको लागि) आनन्द लिन!
यो कुखुरा टर्टीला सूप बनाउने विधि बनाउन सजिलो छ। क्लासिक तोर्टिला सूप रेसिपीसँगै, तोर्टिला स्ट्रिपहरू क्रिस्ड क्रिस्प हुन् र उत्तम क्रunch्क थप्दछन्। म यो सूपलाई चुनूना र कोथीको साथ माथि राख्छु, र यसलाई नयाँ स्वादको साथ बन्द गर्न को लागी ताजाता।
तपाईंको आफ्नै मनपर्ने toppings, कोटिजा पनीर को एक बिट, guacamole, पिको डे ग्यालो , र खट्टा क्रीम सबै महान थप हो! म एक सानो टपिंग बार सिर्जना गर्न चाहान्छु जब म यो सूपको सेवा गर्दछु ताकि सबैले आफ्नो मनपराउन सक्ने कुराहरु थप्न सकून्।
Tortilla सूप के हो?
टोरटिल्ला सूप एक मेक्सिकनबाट प्रेरित सूप हो जुन टमाटर (वा कुखुरा) आधारले बनेको हुन्छ। यसमा सामान्यत: मकै, सिमी जस्ता सामग्री हुन्छ, र प्राय: जसप्लानोस र सिलेट्रो जस्ता अन्य थपहरू। यो सिमर्ड गरिएको छ, त्यसपछि क्रिस्पी टर्टिला स्ट्रिपहरू र जुन तपाईं थप्न चाहानुहुन्छ शीर्षमा छ।
Tortilla सूप सबैभन्दा सामान्य बनेको छ कुखुरा तर तपाईंले भेडा, गाई र माछाले बनेको पाउनुहुनेछ। सूपमा प्रोटिन पकाउँदा स्वादको एक टन थपिन्छ!
Tortilla सूप कसरी बनाउने
सजिलो छ! कुखुराको टर्टीला सूप पकाउन केवल minutes० मिनेट लाग्छ। तपाइँको शाकाहारीहरुलाई पहिले बढि समय बचाउन तयार गर्नुहोस्। सूप उमालेको बखत Tortilla स्ट्रिपहरू बनाउनुहोस् (वा तपाईं सक्नुहुन्छ Tortilla स्ट्रिप्स अनलाइन खरीद गर्नुहोस् वा किरानामा)।
तपाईं केही दिन अगाडि टर्टिला स्ट्रिपहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तिनीहरू केवल एक छेउमा एक मिनेट वा त त प्रत्येक पक्षमा पैन गर्न आवश्यक छ। एक पटक तिनीहरू कुरकुरा हुन्छन्, नुन र पछि बचत गर्नुहोस्।
चिकन Tortilla सूप को लागी:
के कुखुरा कोर्डन bleu संग छ
जालपेनो र प्याजलाई सुगन्धित नभएसम्म (यसलाई कम मसलादार बनाउनको लागि जालपेनो गेडा हटाउनुहोस्)।
अरू सबै थप्नुहोस् र उकासाउनुहोस्
कुखुरा हटाउनुहोस् र काँटाको एक जोडी को साथ यो shred
कुखुरा पछाडि हाल्नुहोस्
यो Tortilla स्ट्रिप्स र इच्छित toppings संग सेवा गर्नुहोस्
यो नुस्खा पागल सजिलो छ!
Tortilla सूप संग के सेवा गर्ने
यहाँ यो मजा लिन्छ जहाँ! Tortilla सूप यति बहुमुखी छ कि लगभग केहि पनि यो संग सेवा गर्न सकिन्छ!
एक चम्किलो tangy बन्दकोबी स्लो वा एक ताजा कर्न सलाद Tortilla सूप को समृद्ध स्वादको साथसाथै Cheesy quesadillas को एक पक्ष पूरक हुनेछ।
सुप टपिंग्सका लागि, केहि काटिएका कालो जैतुनहरू, हरियो चिलीहरू, काटिएको चेडर वा कुचिएको कोटिजा चीज, वा एभोकैडोको क्युब्स प्रयास गर्नुहोस्। यो पक्कै पनि एक नुस्खा हो जुन यसलाई तपाईंको टेबल बर्षको राउन्डमा फेला पार्नेछ!
टाको सूप - यति चाँडो र रमाईलो!
सजिलो चिकन Fajitas
सजिलो चिकन टाको सूप
इजी फिश टाकोस - मनपर्ने!
तत्काल भाँडो कुखुरा टेकोस (प्रेशर कुकर)
स्लो कुकर चिकन एन्चिलाडा सूप - यसलाई सेट गर्नुहोस् र यसलाई बिर्सनुहोस्!
तयारी समय१० मिनेट कुक समय० मिनेट कुल समय० मिनेट सर्भिंगहरू। सर्विंग्स लेखकहोली निल्सन यो सूप सिमी, मकै, टमाटर, र कुखुराको साथ पूर्णतामा सिमेर गरिएको छ। उत्तम सान्त्वनाको भोजनको लागि पिलेट, चूना र टारटिला चिप्सको साथ शीर्षमा यसलाई! प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢१ प्याज काटिएको
▢3 ठूलो लौंग लसुन कीमा
▢१ jalapeño पासा र बीउ छ
▢१ चम्मच भुइँ जीरा
▢१ चम्मच खुर्सानी को धुलो
▢१½ ½ औन्स टमाटर चुच्चो
▢१ टमाटर चिलिस संग पासा गर्न सक्छन् जस्तै रोटल
▢3 कप कुखुराको ब्रोथ
▢१½ ½ औन्स कालो सिमी सक्छ कुल्ला र पानी निकालिए
▢१ कप मकै क्यान्ड भने निकासी
▢दुई कुखुराको स्तन हड्डीविहीन, छालाविना
▢¼ कप पिसेन्ट्रो काटिएको
▢१ चूना जुस
▢१ avocado काटिएको, गार्निशको लागि
क्रिस्पी तोर्टिला स्ट्रिप्स
▢6 '' मकै टारटिला stri 'स्ट्रिपमा काट्नुहोस्
▢¼ कप जैतुनको तेल
तातो ¼ कप जैतुनको तेल मध्यम-उच्च तातो सानो प्यानमा। सानो ब्याचमा टारटिला स्ट्रिपहरू थप्नुहोस् र क्रिस्प नभएसम्म फ्राई गर्नुहोस्। ड्रेन र नुन।
तातो तेल तेल मध्यम आँच मा एक ठूलो भाँडो मा। प्याज, लसुन र jalapeño थप्नुहोस् र प्याज नरम नभएसम्म पकाउनुहोस्।
बाँकी सामग्री जोड्नुहोस् र २० मिनेट वा उमाले पकाउँनुहोस् जबसम्म कुखुरा पकाइदैन।
कुखुरा र टुक्रा हटाउनुहोस्। भाँडामा पछाडि थप्नुहोस् र minutes मिनेटको लागि उकालो।
कटुवामा चम्चा सूप र टोरटिला स्ट्रिप्स, चुना वेजहरू र काटिएको एवोकैडोको साथ शीर्ष।
सेवा दिँदै:१.२कप,क्यालोरिज:२88,कार्बोहाइड्रेट:२g,प्रोटिन:१g,मोटो:एघारg,पागलिएको बोसो:१g,कोलेस्ट्रॉल:36मिलीग्राम,सोडियम:1१मिलीग्राम,पोटासियम:14१।मिलीग्राम,फाइबर:6g,चिनी:।g,भिटामिन ए:२0०IU,भिटामिन सी:19.9मिलीग्राम,क्यालसियम:69मिलीग्राम,फलाम:२.7मिलीग्राम
कीवर्डकुखुरा टर्टीला सूप कोर्सचिकन, मुख्य कोर्स, सूप पकाइयोअमेरिकी, मेक्सिकन© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सोशल मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।